Fatahaado ka dhacay Indoniisiya oo laayay dad fara badan - Halbeeg News
Fatahaado ka dhacay Indoniisiya oo laayay dad fara badan
MUQDISHO(HALBEEG)-Ugu yaraan 168 ruux ayaa geeriyootay 745 kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay kadib markii Sunaami ay ku dhufatay degaannada kulaala Sunda Strait ee dalka Indonesia sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan xukuumadda dalkaas.
Hay’adda musiibooyinka qaranka Indonesia ayaa sheegtay in daadadkii maasheeyay deegaannada qaarkood ay sababeen in ay dumaan boqollaal dhismayaal ah taasoo sare usii qaadi karta tirada dadka halkaa ku naf waayay.
Hirarkan Sunaamida ah ayaa lagu soo warramayaa in ay kasii horreysay folkaano sabab u ahayd in qeybo ka mid ah deegaannada ay kusoo rogmadaan daadad iyo dhiiqo fara badan oo is wata.
Goobaha dhibaatada ugu ba’ani ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahaa goobta dalxiis ee loogu yeedho Tangong oo ku taalla galbeedka Jaawa halkaasoo ay ku sugnaayeen dadweyne fara badan iyo kooxaha garaaca muusika oo dhigayay xaflado waaweyn.
Hay’adda Laanqeyrta Cas ayaa warbaahinta u sheegtay in howlwadeennadeeda ka shaqeeya gurmadku ay ku howlanyihiin sidii ay kusoo badbaadin lahaayeen dad la sheegay in ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha ay Sunaamidu saameysay.
Indonesia ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay kusoo lab laabtaan mar walbana ku dhuftaan aafooyinka dabiiciga ah sida Sunaamida, dhul gariirka iyo folkaanooyinka.
Sebtembar-tii aannu kasoo gudubnay ayay ahayd markii dhul gariir xoog badan oo ruxay jasiiradda Sulawesi ay ku geeriyoodeen in ka badan 200 ruux halka mowjado Sunaami oo ka dhashay isla dhul gariirkaasina uu gabi ahaanba maansheeyay magaalo xeebeedka Palu.
Midowga Afrika: Weerarrada argagixisadu ma hakin doonaan dadaallada nabadda Soomaaliya
AMISOM oo qorsheyneysa iney xoreyso dhulka Al-Shabaab heystaan ka hor 2021-ka